Amboary Ny Olan'Ny Mpandahateny Messenger
Andramo ny mpandahateny anao an-tserasera ary tadiavo ny torolàlana hanamboarana azy
Fampidirana ny fitaovana Fanandramana Mpandahateny amin'ny Internet
Ny Speaker Test dia mamela anao hizaha toetra ny mpandahateny anao an-tserasera, mivantana ao amin'ny tranonkalanao. Izy io koa dia manome torolàlana momba ny fanamboarana ny mpandahateny anao amin'ny rindranasa feo sy horonan-tsary ary amin'ny fitaovana maro.
Betsaka ny antony mety tsy mandeha ny mpandahateny anao. Mety hanana olana amin'ny mpandahateny ianao raha tsy apetraka tsara ny rindranasa ampiasain'ny mpandahateny. Na mety tsy hiasa eo amin'ny fitaovanao mihitsy ilay mpandahateny, na inona na inona fampiharana ampiasainao.
Ny Speaker Test dia mamela anao hizaha toetra raha toa ka voamarika ny mpandahateny anao ary mandeha tsara amin'ny fitaovanao. Azonao atao ny manamboatra raha ny olana amin'ny mpandahateny dia avy amin'ny fitaovanao na amin'ny fampiharana ampiasain'ny mpandahateny. Na izany na tsy izany dia manana torolàlana momba ny fanamboarana ireo olan'ny mpandahateny ianao.
Aorian'ny fanombohana ny fitsapana dia alao antoka fa ampy ny haavon'ny feonao. Tokony handre mozika avy amin'ny mpandahateny nataonao default ianao. Ho hitanao koa ny menio dropdown mamela anao hisafidy mpandahateny hafa (raha misy amin'ny fitaovana misy anao ny sasany). Noho izany, azonao atao ny mitsapa ny mpandahateny rehetra amin'ny fitaovanao. Raha tsy maheno feo ianao dia zahao ireo torolàlana manokana momba ny fitaovanao sy ny fampiharana anao.
Misafidiana fampiharana sy fitaovana iray hahitanao torolàlana manokana hamahana ireo olan'ny mpandahateny anao